I-Google AMP Cache URL Generator - TO
offline_bolt Dala amakhasi e-AMP
code I-AMPHTML Tag Generator
assignment_turned_in Ukuhlolwa kwesilondolozi se-AMP
dns I-Google AMP Cache URL Generator
power I-plugin ye-WordPress AMP
power I-plugin ye-PHP AMP
power Isifanekiso se-Blogger AMP
warning I-plugin ye-AMP ayisebenzi?
extension Ikhodi ye-AMP Google Analytics
extension Ukubalwa kwe-AMP IVW online
extension Shumeka i-AMP YouTube Tag
extension Shumeka i-AMP Brightcove Tag
extension Dala i-AMP Carousel Slider
extension Faka umaki we-AMP iframe
extension Umsebenzi wohlu bukhoma we-AMP
edit_attributes Isaziso sokuvikelwa kwedatha
I- Google-AMP-Cache-URL-Generator idala i-URL efanelekile ku-AMP-Cache-Format kusuka ku-URL ejwayelekile yanoma iyiphi i-subpage, yanoma iyiphi iwebhusayithi.
Dala i-URL ye-Google AMP Yemibhalo Yehhovisi
- Ngicela ulinde -
- iwebhusayithi iyahlolwa -
Kwenziwe i-URL ye-Google AMP cache
Yakha i-url yenqolobane ye-AMP
Nge-URL ye-cache ekhiqiziwe, inguqulo ye-AMP yewebhusayithi egcinwe kunqolobane ye-Google AMP ingabizwa UMA ikhasi elihambelanayo selivele likhonjwe yi-Google futhi lagcinwa kunqolobane ye-Google.
Ifomethi ye-URL yesilondolozi se-AMP
Uma kungenzeka, i-Google AMP Cache idala isizinda sawo wonke amakhasi we-AMP asesizindeni esisodwa.
Okokuqala, isizinda sewebhusayithi siguqulwa sisuka ku- IDN (ikhodi yeponi) siye ku- UTF-8 . Iseva yenqolobane ingena esikhundleni:
ngakunye - (1 ikhonco) ukudlula - (2 amakhonco)
wonke umuntu . (Iphuzu eli-1) kuye - (1 ikhonco)
Isibonelo: amp-cloud.de uzoba
I-url yesilondolozi se-AMP:
Ithini inqolobane ye-Google AMP?
Lokhu kusho ukuthi iGoogle ikhomba futhi igcine inguqulo yekhasi le-AMP kuseva yayo, ngaphansi kwe-URL ye-AMP cache server ezimele edalwe ngokuya ngephethini ethile. Ngale URL, ngefomethi ye-AMP cache URL , ungabiza futhi ubuke inguqulo yamanje ye-AMPHTML okwamanje egcinwe kunqolobane ye-AMP yenjini yokusesha yakwa-Google. - Imininingwane engaphezulu mayelana nesilondolozi se-Google AMP .
Dala ikhasi le-AMP Ukuvikelwa kwedatha nokusetshenziswa kwamakhukhi umbhalo
Sawubona futhi ngiyabonga ngokuvakasha kwakho! - Amakhukhi asetshenziselwa ukuhlela ukusebenza kwe - "www.amp-cloud.de". Lokhu kungafaka nezinsizakalo nokuqukethwe okuvela kubahlinzeki abavela eceleni, isb.ukuhlinzeka ngemisebenzi yezokuxhumana noma okuqukethwe kwevidiyo, kepha futhi nokunika amandla ukuhlaziya okungaziwa, kwezibalo kokusebenza kwewebhusayithi ukuthi kwenziwe ngcono futhi kuxhaswe iwebhusayithi ukuze kuqhutshekwe kube khona kwaleli khasi ukwesekwa. Ngokuya ngomsebenzi, idatha engabelwa wena ingadluliselwa kubantu besithathu futhi icutshungulwe yibo. Ungathola okuningi ngokusetshenziswa nezinketho zokushintsha amasethingi akho amakhukhi lapha: Imininingwane yokuvikelwa kwedatha
Vumela wonke amakhukhi
Yenqaba wonke amakhukhi